elinks: Ihe nchọgharị weebụ kachasị mma maka ọdụ Linux | Site na Linux
N'ụbọchị ikpeazụ ndị a, Nsogbu njikọ m amụbaala n'ụzọ ọsọsọ, na-adabere ugbu a na njikọ sitere n'aka ndị obodo, yana ọsọ ọsọ na nchedo ọ gụnyere. Mmachi a emeela ka m jigharịa nchọgharị ịntanetị Maka ọdụ Linux, n'ezie, ugbu a, m na-eme nyocha m site na njikwa na iji ya Onwuchekwa nke m na-atụle nke kachasị mma nke ụdị ya.
Mmetụta a nke ịbụ onye a manyere ịnyagharịa site na njedebe, nke bụ ụzọ dị irè isi nweta ozi maka ọtụtụ, echetara m oge m mgbe m mụtara ịhazi sava na-enweghị eserese eserese na naanị otu ụzọ anyị nwere nyocha ihe sitere na ngwaọrụ ndị a magburu onwe ya.
1 Gịnị bụ elinks?
2 Elinks atụmatụ
3 Etu esi etinye elinks?
3.1 Wụnye elinks na Debian na nkwekọrịta.
3.2 Wụnye elinks na Red Hat na nkwekọrịta.
3.3 Wụnye elinks na Arch Linux na nkwekọrịta
4 Kedu esi eji elinks?
Gịnị bụ elinks?
elinks bụ ihe dị elu ihe nchọgharị weebụ maka ọnụ, mepere emepe, nke dere Mikulas Patocka na ederede ederede maka UNIX sistemụ arụmọrụ, yana ọrụ (HTTP / FTP / ..), yana nkwado maka okpokolo agba na okpokoro.
Ngwaọrụ a nwere ike ịhazi nke ọma yana arụmọrụ ya nwere ike ịgbatị site na ngwa edere na ya Lua, Perl, Naa o Ọghọm. A mụrụ ya n’ebumnuche iji meziwanye onye bu ya ụzọ Links na nke nta nke nta, agbakwunyere arụmọrụ dị iche iche, gụnyere iji taabụ iji na-agagharị, ntinye nke ibe edokọbara na ohere nke nbudata.
Nkwado maka CSS y ECMAScript.
A sụgharịrị gaa n'ọtụtụ asụsụ.
Akuko, ibe edokwubara, Uzo Uzo mkpirisi, Nchọọ Nchọgharị.
Mfe echichi na ojiji.
N'etiti ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ.
Etu esi etinye elinks?
Ntinye nke elinks dị mfe ma ọ dị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile a na-ekesa ndị kasị ewu ewu. Nwere ike ịnweta isi iyi ọrụ na iwu ndị a:
# git mmepụta oyiri http://elinks.cz/elinks.git # cd elinks
Wụnye elinks na Debian na nkwekọrịta.
Wụnye elinks na Red Hat na nkwekọrịta.
Wụnye elinks na Arch Linux na nkwekọrịta
Kedu esi eji elinks?
Nwere ike ịmalite elinks na
$ gbadoro anya
ma ọ bụ, malite ihe nchọgharị ozugbo na weebụ ịchọrọ:
N'ihi njirimara ndị a niile, njikwa ya dị mfe, uru nke inwe ike ịgbatị ha dịka ihe m chọrọ, ogo ya dị elu na nhazi ya dị mfe bụ ihe mere ka m tụlee elinks: «Ihe nchọgharị weebụ kachasị mma maka ọdụ Linux".
You jirila ihe nchọgharị weebụ a tupu? Kedu maka?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » elinks: Ihe kacha mma nchọgharị na weebụ maka Linux ọnụ
Ihe m achọtabeghị na Debian ma Archlinux ma bụ etu esi enyere ndị na-eme nchọgharị aka.
Dị ka @federico na-ekwu, ndị a bụ usoro:
n'ime Elinks, pịa ESC ma gaa na nhọrọ menu Njikwa -> Mepee taabụ ọhụrụ, ma ọ bụ pịa igodo t, ọ na - ajụ gị na URL ọhụrụ
Ogbe 19 dijo
Nke zuru oke ma dị mma n'isiokwu a, Luigys. Banyere ajụjụ nke @tenshalito jụrụ, n'ime Elinks, ị pịa ESC wee gaa na nhọrọ nhọrọ Njikwa -> Mepee taabụ ọhụrụ, ma ọ bụ pịa igodo t, ọ na - ajụ gị na URL ọhụrụ. Dị ka Luigys, m na-eji Links2 na Elinks ọtụtụ, n'azụ Sxy Proxy na nyocha.
I meela nke ukwuu Federico, nke ahụ bụ azịza nke nsogbu tenshalite
na Archlinux ọ bụ na nchekwa obodo. iji pacman, ọ bụghị yaourt. 🙂
Ọ na-arụ ọrụ na tty?
Edemede mara mma, nke na-atọ ụtọ.
Zaghachi na Ces912
Kedu ka m ga esi esi mee https, ha anaghị emeghe peeji
Etu ị ga - esi họrọ sọftụwia maka akara ire ere gị (POS / POS)